Akuyona imfihlo ukuthi ezweni lethu kuwumkhuba ukunikeza izipho zokuzalwa kanye namanye amaholide athandwayo. Kakade ngenyanga yokuqala yokuphila, emehlweni omakoti, izivakashi ziletha izipho. Kulokhu, abaningi abazi ukuthi yini ongayinika ingane, intombazane noma umfana.
Yini ongayinika umfana osanda kuzalwa? Kule ndaba kungcono ukubonisana nabazali bakhe. Njengomthetho, ngonyaka wokuqala wokuphila, izipho "ziyalwe". Abazali abasebancane bavame ukulungiselela ukuvela kwengane, okusho ukuthi bazuze izinto ezibalulekile kusengaphambili, izingubo kanye nesibhamu esinomgibeli. Ngakho-ke, noma yisiphi isipho esikhulu kufanele sihlanganiswe - kungenzeka ukuthi le nto kakade ithengwe.
Yini ongayinika umfana ngonyaka wokuqala wokuphila kwakhe? Ngokuvamile bahlinzeka izingubo. Izingane zikhula masinyane, kanti umntwana onyakeni wokuqala udinga inqwaba yezinsimbi ezihlukahlukene kanye ne-raspashonok. Lokhu kuyiqiniso, kodwa kunama-nuances athile. Ungathengi izinto ezincane kakhulu, ikakhulukazi uma ingane ingazalwanga okwamanje. Kungenzeka ukuthi umntwana osanda kuzalwa uzoba mkhulu, futhi izingubo ziyoba ezincane. Isipho esihle somfana onyakeni wakhe wokuqala wokuphila kuyoba yisitifiketi sokuhamba - kulokhu, into esemqoka ukuqinisekisa ukuthi zonke izivakashi nazo ngeke zithenge izingubo zalesi sikhulu. Amacala lapho abazali enikeza ingane izinto ezifanayo akuvamile. Unganika izimonyo ukunakekelwa kwezinsana (i-powder, ama-shampoos, i-foam yokugeza), kanye nama-diapers. Izinto ezinjalo zidliwe futhi zidinga njalo.
Yini ongayinika umfana iminyaka engu-1? Ngokufanayo, unganika izingubo - izingane kule minyaka ziqala ukuhamba okuningi, zihambe ngemilenze yazo, okusho ukuthi zihlale zingcolile futhi zingcolile. Izembatho ezithintekayo, eziqinile nezingapheliyo kule minyaka zidingekile. Ngaphezu kwalokho, izingane zalesikhathi zinesithakazelo esikhulu ekukhuphukeni nasezintweni zokudlala, izimoto ezingakwazi ukushayela, njll. Ngakho-ke, iloli noma isitimela kuyoba yisipho esihle kakhulu somfana ngalesi sikhathi. Into eyinhloko ukuthi ayinayo izingxenye ezincane futhi elula futhi ehlala njalo ngangokunokwenzeka - izingane kule minyaka zizama ukuzama izinto ezenzweni.
Yini ongayinika umfana eneminyaka eyodwa kuya kwemibili? Ingane ekhuthele futhi enombuzo izothanda imidlalo ehlukahlukene yemfundo, ama-cubes, amabhola. Unganika isethi yamakaki, amakhrayoni, izikhonkwane zejel ezinemibala kanye ne-albhamu enkulu. Izingane zalesikhathi sithokozile ukucwaninga ngephepha elimnandi likaKhisimusi-malyaki.
Yini ongayinika umfana iminyaka emithathu? Abaneminyaka emithathu ubudala banokuzibuza kakhulu, futhi banokuhlakanipha kakhulu. Ingane ezolile ekwazisa ubuqili futhi ithanda ukuphishekela ukuhlakanipha, unganika umdwebo noma umklami onjenge "Lego". Isebenzayo futhi iselula - zonke izinhlobo zamabhasikithi, izimoto zomlilo namaphoyisa. Okubaluleke kakhulu ukuthi kusukela kulesi sikhathi ukuvinjelwa kweminyaka "izingane ezineminyaka engaphansi kwengu-3 ubudala" zisusiwe, okusho ukuthi cishe noma yimaphi amathoyizi ayatholakala.
Akekho ingane eyodwa kule minyaka engayithandi imodeli elawulwa yomsakazo. Indiza noma i-helicopter enezilawuli ezikude, imoto yokudlala ongazigibela, i- tricycle izoba yisipho esihle kakhulu somntwana.
Yini ongayinika umfana 4, 5 iminyaka? Lokhu kungcono ukuzibuza yena ngokwakhe. Ingane kule minyaka ivame ukuyothenga futhi iyazi kahle ukuthi yimaphi amathoyizi athengiswa khona. Uma inyane elilodwa elineminyaka elilodwa lingakhathazeki ukuthi lizodlala kanjani, khona-ke uneminyaka emine ubudala angayenqaba isipho esingathandeki.
Okufanayo kusebenza ezinganeni ezindala. Vumelana ukuthi ngisho nabantu abadala abakuthandi ukuthola izipho ezingadingekile, futhi yini esingayisho kusuka ezinganeni ezincane. Ukwenza isipho sibe isimanga, ungacela abazali bakho ukuthi ingane yakho ifuna ukuthini usuku lokuzalwa.
Indlela ukunquma ubukhulu izibuko izingane kanye nabantu abadala?
Baldwin Brothers: izithombe, Filmography. Adume iningi labazalwane Baldwin
Ingulube in sauce lwesinaphi: ukupheka zokupheka
Indlela yokubuyisela i-microflora yangasese: amanye amathiphu